Ngaba ukuvuvukala kwi-Brain ngaba luphawu lwe-Fibromyalgia?
30 / 06 / 2019 /0 Amazwana/i udinwe/av ubuhlungu
Ngoku, ikhonkco lifunyenwe phakathi kokunyuka kokuvuvukala kwengqondo kunye ne-fibromyalgia.
I-Fibromyalgia sisifo esibuhlungu esibuhlungu sesifo esibuhlungu kakhulu esibethwa zizininzi, kodwa singagxili kuphando nakunyango. Isigulo esibonakalisa ubuntu bubangela iintlungu kwiindawo ezinkulu zomzimba (ezihlala zihamba), iingxaki zokulala, ukudinwa okuqhubekayo kunye nengqondo enkungwini ubuchopho (ngokuyinxenye ngenxa yokungalali).
Kudala ikrokrelwa ukuba ukuvuvukala kunye nefibromyalgia inento ethile yokunxibelelana. Kodwa ungaze ubenako ukubonisa ubungqina boqhagamshelo ngqo. Abaphandi baseSweden kwiziko laseKarolinska ngoku baqhube uphando olunzulu ngokusebenzisana nezazinzulu zaseMelika kwisibhedlele iMassachusetts General Esinokukhokelela kwindlela kwindawo eyayingaziwa ngaphambili ye-fibromyalgia. Ezi ziphumo ziye zaxhaswa esinye isifundo Kwijenali Ubuchopho, ukuziphatha kunye nokungabikho komzimba.
Iingcebiso malunga neMpilo eNtsha yamathumbu:
Uninzi lwethu lwamalungu angaphezu kwe-18500 eqela "i-Rheumatism kunye ne-Chronic pain" anika ingxelo yokuchasana nokuvuvukala kwezibonelelo ezithile zendalo. Uphando lwakutsha nje lubonisa unxibelelwano olucacileyo phakathi kwamathumbu kunye nengqondo, yiyo loo nto sicebisa izongezelelo zendalo zempilo engcono yamathumbu. Zama isibonelelo nge probiotics (Iibacteria ezilungileyo) Isisu seLectinect. Kwabaninzi, kunokuba nefuthe elihle, kwaye siyazi nokuba impilo yamathumbu ibaluleke kakhulu kwindlela oziva ngayo ngenye indlela-zombini ngokwamandla, kodwa nakwimood.
I-Fibromyalgia kunye nokuvuvukala
I-Fibromyalgia ichazwa ngokuba rheumatism yeathishu ethambileyo. Oku kuthetha, phakathi kwezinye izinto, ukuba ubone iimpendulo ezingaqhelekanga kwizihlunu ezithambileyo-ezinje ngezihlunu kunye nezicubu zomzimba. Ezi zihlala zihlala ziba hypersensitive kumntu one-fibromyalgia-ekhokelela ekwandiseni imiqondiso ye-nerve kunye nokuxela okungaphaya kwengqondo. Oko kuthetha ukuba ukungonwabi okuncinci kunokubangela iintlungu ezinkulu.
Akumangalisi ukuba, abaphandi bakholelwe ukuba oku kungakhokelela ekuvukeleni okuxhaphakileyo kwezifo ezinesifo se-fibromyalgia.
Isifundo: Imilinganiselo yeProtein ekhethekileyo
Abaphandi baqala ngokubeka imephu kwiimpawu ezine-fibromyalgia- emva koko liqela lolawulo. Emva koko iba nzima ngakumbi. Asiyi kungena kwiinkcukacha ezincinci, kodwa endaweni yoko kukunika umbono oqondakalayo.
Emva koko babhala ukwanda kokudumba kwe-neural kuzo zombini iingqondo kunye nomjelo womqolo- kwaye ngakumbi ngohlobo lokucacisa okungaphaya kokusebenza kwiiseli ze-glial. Ezi ziiseli ezifumaneka ngaphakathi kwenkqubo yemithambo-luvo, zijikeleze ii-neurons, kwaye zinemisebenzi emibini ephambili:
Ukwakha okunesondlo (kubandakanya i-myelin ejikeleze imicu yemithambo)
Ukucutha ukuvela kosulelo kwaye ususe inkunkuma
Ukuqhutywa kwemaphu kwenziwa, phakathi kwezinye izinto, ngokusebenzisa ubuchwephesha bokucingela, obulinganisa umsebenzi weproteni ethile ebizwa ngokuba yi-TSPO. Iprotein efumaneka kwixabiso elikhulu kakhulu ukuba uneeseli ezisebenzayo zeglial.
Uphononongo lophando lubhale umahluko ocacileyo phakathi kwabo bachaphazeleka yi-fibromyalgia xa kuthelekiswa neqela lolawulo-elisinika ithemba lokuba oku kungavula indlela yokuba esi sifo siqwalaselwe ekugqibeleni.
Ingakhokelela kunyango olutsha
Ingxaki enkulu nge-fibromyalgia kukuba umntu akayazi imbangela yengxaki-kwaye ke ngenxa yoko akazi kakuhle ukuba aphathe ntoni. Olu phando ekugqibeleni lunokunceda kuloo nto-kwaye inike abanye abaphandi inani lamathuba amatsha ngokunxulumene nophando olunenjongo ngakumbi kolu lwazi lutsha.
Ngokwesiqu, sicinga ukuba kungakhokelela kuphando ekujoliswe kulo kunye nonyango, kodwa asiqinisekanga ukuba luya kuthatha ixesha elingakanani. Emva kwayo yonke loo nto, siyazi ukuba i-fibromyalgia ayikaze ibe yindawo enikezwe ukugxila okukhulu xa kuziwa kuthintelo kunye nonyango.
Iziphumo zifumana ukuchaza iimpawu eziqondayo
I-Fibromyalgia inokukhokelela entloko ukuba ingasoloko ichaphazeleka ngokupheleleyo- siyibiza ngokuba yinkungu. Oku kungenxa yezizathu ezahlukeneyo- kubandakanya ukungalali kakuhle ngenxa yokuqaqanjelwa kunye nokungazinzi emzimbeni, kunye noko besikrokrela ixesha elide- oko kukuthi umzimba kufuneka ulwe rhoqo ukunciphisa iimeko zokudumba emzimbeni. Kwaye kuyadinisa ekuhambeni kwexesha.
Kumacandelo amabini alandelayo, siza kuthetha ngakumbi malunga nendlela yokuzivocavoca eyenziwe siko kunye nokutya okuchasene nokuvuvukala (ukutya kwe-fibromyalgia) kunokukunceda ukuba uphinde uphinde ulawulwe ngolawulo lwakho lwe-fibromyalgia.
I-Fibromyalgia, ukuvuvukala kunye nokuzivocavoca
Ukuzivocavoca rhoqo nge-fibromyalgia kunzima kakhulu. Unokucinga kuphela ukuba ingcinga yokuzilolonga xa umzimba wonke ubuhlungu. Okwangoku, kubaluleke kakhulu ukuba ungayeki ngokupheleleyo kwaye ujolise kwimithambo eguqulweyo- nokuba luqeqesho lokuhamba, ukuhamba ehlathini okanye ukuzilolonga amandla njengoko kubonisiwe ngezantsi. Ukugcina ukuhambisa kunegalelo kumzimba osebenzayo ngakumbi ngokuphucula ukujikeleza kwegazi- ekunokukunceda ugcine ukudumba kujongiwe, njengoko kunokuba nefuthe lokuchasana.
Kwividiyo engezantsi ungabona inkqubo yokuqeqesha abo bane-rheumatic fiber rheumatic fibromyalgia ephuhliswa yi I-chiropractor Alexander Andorff. Le yinkqubo enokukunceda ukomeleza imisipha ebalulekileyo yangasemva kunye nengundoqo- enokuthi ke ibe nomsebenzi ophuculweyo kunye nokujikeleza kwegazi.
I-Fibromyalgia kunye ne-Anti-immune Diet
Ngoku ekubeni kusaziwa ukuba ukwanda kokuvuvukala okunyukayo kudlala indima ye-fibromyalgia, kubalulekile ukugxila kukutya okucinezela ukudumba emzimbeni. Kwinqaku elingezantsi ungafunda ngakumbi malunga nokuba iintlobo ezithile zokutya zibangela njani ukuvuvukala okungakumbi emzimbeni (ukuvuvukala) kunye nokuba abanye banciphisa njani ukuvuvukala (anti-immune). Ukucetyiswa ukufundwa kwakhe nawuphina umntu onesifo i-fibromyalgia.
Ukwazi ukuba i-fibromyalgia ikhokelela kwi-hypersensitivity (imiqondiso ekhulayo yentlungu) kunye nokuphendula okungapheliyo, uyaqonda ukuba eli liqela lesigulana elifuna unyango ngakumbi kunabanye. Eli qela lesigulana ke ngoku lihlala linokusebenzisa okuphezulu iipilisi zentlungu- kunye neendlela eziqhelekileyo zonyango ezifana nonyango lwe-musculoskeletal laser, ukuthambisa kunye nokuhlanganisa ngokudibeneyo- umzekelo kunye ne-physiotherapist okanye i-chiropractor.
Uninzi lwezigulana zisebenzisa iindlela zokuzilungisa kunye nonyango olucinga ukuba luzisebenzela ngokwazo. Umzekelo, uxinzelelo luxhasa kwaye lubangela iibhola zenqaku, kodwa zikwakhona nezinye izinto ezikhethiweyo kunye nezinto ezikhethwayo.
Umthombo: I-Brain glial activation kwi-fibromyalgia-Uphando oluninzi lwepostitron emission tomography. 2019.
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/betennelse-fibromyalgi.jpg?media=1648573622 368 700 ubuhlungu https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 ubuhlungu2019-06-30 09:51:522021-03-24 10:55:42I-Fibromyalgia inokubangela ukwanda kokuvuvukala kwengqondo
Yintoni ofanele uyazi ngePolymyalgia Rheumatism Olu mahluko kwi-gut unokuba yimbangela ye-fibromyalgia